बेलायतमा महिला बेरोजगारी सन् १९७१ यताकै कम, आम्दानी चाहीं कतिले बढ्यो ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय बेलायतमा महिला बेरोजगारी सन् १९७१ यताकै कम, आम्दानी चाहीं कतिले बढ्यो ?
on: १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १९:१९ अन्तरराष्ट्रिय
जेठ १, लन्डन (बेलायत) । बेलायतमा महिला बेरोजगारी दर कीर्तिमानी न्यूनस्तरमा ओर्लिएको छ । त्यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ‘ओएनएस’ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा महिला बेरोजगारी दर ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा आएको छ । यो सन् १९७१ मा ओएनएसले तथ्यांक संकलन गरेर राख्न थालेयताकै न्यून हो ।
जनवरी–मार्च त्रैमासमा समग्र बेरोजगारी दर पनि घटेर ३ दशमलव ८ प्रतिशतमा समेटिएको छ । यो पनि सन् १९७४ यताकै सबैभन्दा कम भएको ओएनएसको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा पुरुष बेरोजगारी दर भने ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । यो सन् १९७५ यताकै कम हो ।
मार्च त्रैमासमा कर्मचारीहरुको बोनस बाहेक औसत साप्ताहिक कमाई ३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । महिला र पुरुष दुवैको बेरोजगारी दर सन् २०१३ को अन्त्ययता घट्न थालेको हो । अर्थतन्त्रले अहिले विभिन्न समस्या सामना गरिरहेको अवस्थामा आएको पछिल्लो श्रम बजारको तथ्यांक सन्तोषजनक र राम्रो भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यूरोपेली संघ (ईयू)बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)सँग सम्बन्धित अनिश्चय अहिले पनि कायमै छ । यस्तोमा बेलायती श्रम बजार भने निकै हदसम्म लचिलो रहेको वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी हर्ग्रिभ्स ल्यान्सडाउनका वरिष्ठ अर्थशास्त्री बेन ब्रेट्टेलले बताएका छन् । एजेन्सी
११ बैशाख २०७६, बुधबार १९:००